Fanisam-bahoaka : Hivoaka amin’ny oktobra ny lisitra vonjimaika
Vita amin’ny ankapobeny ny fanisana ny mponina andiany faha-3 eto Madagasikara. Ny datin’ny 25 jona teo no voalaza fa nifarana tamin’ny fomba ofisialy izany, araka ny filazan’ny tale jeneralin’ny ivotoerana nasionaly misahana ny atontan’isa na …Tohiny
Maurice Tsihiavonana : Manao ranolava ireo mankahery ny fianakaviana
Ankoatra ny maha-mpanao gazety azy, olon’ny fihavanana sy olon’ny fiaraha-monina ihany koa i Maurice Tsihiavonana. Nodimandry ny alatsinainy teo ity mpamakafaka politika manana ny laznay ity. Hatramin’ny nahatongavan’ny nofo mangatsikany etsy amin’ny trano fonenany etsy …Tohiny
Fanakanan-dalana any amin’ny RN4 : Nahazo fahafahana ireo voalaza ho tompon’antoka
Vantany vao vita ny fanadihadiana rehetra nataon’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena, dia natolotra ny fampanoavana tao Maevatanàna avy hatrany ireo olona tompon’antoka tamin’ny fanafihana taksiborosy iray mampitohy an’iny lalam-pirenena fahaefatra iny. Rehefa nivoaka anefa ny didy, …Tohiny
Voatsikera mafy ny vaomieram-pirenena mahaleo tena mikarakara ny fifidianana (CENI ) tamin’ny fihetsika nataon’ny kandida Andry Rajoelina, izay toa manao fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana sahady efa ho herinandro maromaro izao. Toa nitazam-potsiny ny zava-nisy mantsy ireto …Tohiny
Camille Vital:NAMPAMONO MANAMBONINAHITRA
Ady amin’ny kolikoly : Mitaky ny fahatongavan-tsainan’ny tsirairay